किन खेल्छ मनमा यौनका कुरा ! - Nayabulanda.com
हस्तमैथुन यौनइच्छाको समाधान हो?
नयाँ बुलन्द २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १८:४० 269 पटक हेरिएको
विशेष गरेर युवावस्थामा यौनइच्छा तीव्र हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन भने सजिलो हुँदैन । यस्तो बेला दिमागमा यौनसम्बन्धी सोच आउनु स्वभाविक हो ।
यौनइच्छाको समाधान के होला ?
यौन सम्पर्क राख्नु नै यौनइच्छा शान्त पार्ने प्रमुख क्रियाकलाप हो । विवाह गर्ने सामाजिक परम्परा यौनइच्छा शान्त पार्न गरिने एउटा सामाजिक उपाय पनि हो । विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गर्दा चियो–चर्चाको विषय हुन्छ भने विवाहपछि जति पटक यौन सम्पर्क गरे पनि त्यो चियोचर्चाको विषय हुँदैन ।
साथै बिवाहपूर्व गरिने यौन सम्बन्ध ठाँउ अनुसार सामाजिक नियम बिपरित पनि हुन सक्छ । प्यास लागे पानी पिउने वा भोक लागे खाना खानेजस्तै यौनइच्छा शान्त पार्ने कार्य गर्नु नै यसको हल हो । यौनइच्छा हुनु समस्या होईन किनभने यो स्वभाविक कुरा हो । जोडी नभएको अवस्थामा यौनेच्छा शान्त पार्न हस्तमैथुनलाई प्रयोग गर्नु यो सामान्य कुरा हो ।